Volcanoids: iyo yekupona yevhidhiyo mutambo pamwe neyekuvandudza yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Volcanoids kupona uye kuvaka mutambo wevhidhiyo inonakidza kwazvo uye ine yakashanda zvakanaka mifananidzo maererano nedhizaini. Mumutambo wevhidhiyo, uchafanirwa kurarama munyika ino yedhijitari iwe uchifanira kuvaka hwaro mune ino inoshamisa nyika. Uye zvakare, ikozvino ine yakakosha yekuvandudza iyo vese vashandisi veLinux vachada uye izvo zvinozovandudza ikozvino kusimudzira uye mashandiro ezita remusoro.
Vagadziri vayo vakatoratidza zvimwe zviono zvemutambo wevhidhiyo unomhanya paLinux, kunyangwe paine zvimwe zvikanganiso zvinofanirwa kukwenenzverwa. Iwo matambudziko zvishoma nezvishoma Ivo vari kugadzirisa uye iwe unogona kuona mwenje kumagumo kwetangi. Vagadziri vadzoka kuzogovana dzimwe nhau nezve kufambira mberi kwavari kuita kweLinux port, iyo yakwanisa kumhanya mushe paSteamOS neMESA 17.2.4, asi isingashande paUbuntu neiyo yekare AMD GPU, kubvira iyo Radeon HD 6950 uye yapfuura, asi hongu neayo matsva.
Uye zvakare, izvo zvishoma zvinodiwa maererano neiyo graphical API ichave iri OpenGL Core 4.5 kana Vulkan. Izvo zvakashandawo pane iyo magirafu uye zvimwe zvipumburu zvaimbove zvakapfuura. Idzo inhau huru, zvirokwazvo Alpha 1.13 iri kuuya muvhiki kana maviri, uye izvo zvinosanganisira Linux rutsigiro futi. Izvo chaizvo zvinonakidza kunzwa aya akanaka nhau nezve iri rinonakidza zita rakagadzirwa neVolcanoid studio.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iri zita, tarisa mavhidhiyo uye uwane dzimwe dzakagadziridzwa nhau, unogona kuwana inotevera chinongedzo chevakakurumbira Chitoro cheValve, chiutsi. Ndinovimba kuramba ndichitaura nhau huru nezveLinux yemitambo panguva ya2019, uye kuti akawanda uye akawanda mazita ane hukuru hwemhando anoenderera mberi achibuda kune yedu yatinofarira chikuva. Tinopedzisa 2018 nemazita anodarika zviuru zvishanu, tinotarisira kuti 5000 kana 6000 ichasvikwa mukupera kwegore rino, pasina mubvunzo danho rakakura kuenda kumberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Volcanoids: iyo yekupona yevhidhiyo mutambo ine yekuvandudza yeLinux